Somaliland oo labaataneeyo wariye ku xirtay Hargaysa. – Radio Daljir
Somaliland oo labaataneeyo wariye ku xirtay Hargaysa.
Hargaysa,Jan 15 -Ciidamada maamulka Somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay inka badan labaataneeyo wariye oo ka hawlgala warbaahinta qaybaheeda kale duwan.
Xariga wariyeyaasha loo gaystay maanta ayaa ka dambeeyay,kadib markii ay banaanbaxyo ka dhigeen xarig maalintii shalay loogu gaystay magaalada Hargaysa qaar ka mid ah howlwadeenada telfashinka.
Nimco Cumar Sabriye oo ka mid ah shaqaalaha telfishinka Horncable Tv ee xabsiga la dhigay ayaa u sheegtay Radio Daljir wariyeyaasha xiran inay ku jiraan agaasimaha telfishinka Horn Cable Maxamed Cabdi Sh., iyo gudoomiyha ururka saxafiyiinta Somaliland ee SOLJA.
M/wayane Siilaanyo ayaa shalay ku eedeeyey telfishinka ku hadla afka Soomaaliga ee Horn cable oo fadhigiisu yahay magaalada Hargaysa in uu warar aan jirin ka baahiyay xukuumadiisa.
Maamulka Somaliland oo ku dooda inuu ilaaliyo nidaamka dimuqraadiyadda ayaa sanadihii ugu dambeeyay xarig sanado qaatay iyo kuwo maalmo ah u gaystay wariyeyaal kale duwan oo ka hawlgala deegaanada uu ka arimiyo.